Saadka logol ee Paris - Qadka tareenka Sete | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB33 FaransiiskaAbaal marinta khadka tareenka ee Ekol Logistics Paris - Sete
Abaal marinta khadka tareenka ee Ekol Logistics Paris - Sete
18 / 12 / 2016 33 Faransiiska, 35 Izmir, YURUB, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD, TURKEY
Abaalmarinta loo yaqaan 'Ekol Logistics to Paris - Sete train Reward Abaalmarinta': Gawaarida safarka ee Intermodal Transport Ekol, 7 6, oo ka dhacday Paris bishii Diseembar. Nuit du Shortsea waxaa lagu abaal mariyey qeybta Moultimodal Operator ee Paris - Sete khadka tareenka ee Korantada ee Shipping et de l'intermodalité Gala.
Ekol logistics, oo kaashanaysa shirkada tareenka ee ugu muhiimsan Yurub VIIA, Sete Port ee kuyaala magaalada Paris ee Noisy-le-Sec usbuuciiba hal mar, adeegga wadajirka ah ayaa la bilaabay Oktoobar. Muddo gaaban gudahooda oo saddex bilood ah, xariiqu wuxuu keenay abaalmarinta Ekol iyo VIIA Multimodal Operator abaalmarinta. Ekol, oo hadafkeedu yahay in lagu daro Ro-Ro labaad oo lagu daro isku xirka badda ee Izmir-Sete, waxay kordhin doontaa awoodeeda adeegga tareenka iyo soo noqnoqoshada iyada oo barbar socota horumarkan 2017.
Murat Boğ, Maareeyaha Guud ee Kooxda Gaadiidka ee Ekol; “Paris - Xariiqda Sete waa furaha annaga. Tani line labada Turkey iyo Iran la Europe mahad, gobolka North Africa ku xidhi kartaa si ka fiican in Paris. Aad ayaan ugu faraxsanahay kuna faraxsanahay in lasiiyay abaal marintan. Abaalmarintani waxay caddaynaysaa in habka Ekol ee horumarinta xalalka isku xidhka ay sax yihiin. Waxaan qorsheyneynaa inaan qadka tareenka badan uga dhisi doono Yurub bilaha soo socda. ”
Thierry Le Guilloux, Gudoomiyaha Golaha fulinta ee VIIA, ayaa yiri: uz aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno abaalmarintan. Maaddaama aan diiradda saarneyno ganacsiga tareennada ee VIIA, waxaan aaminsanahay inay muhiim u tahay qaybta gaadiidku inay horumariyaan isku xirka isku xirka ka dhexeeya jidadka tareenka iyo dekedaha Ro-Ro. Waxaan qabnaa in khadka u dhexeeya Port of Sete iyo Paris uu yahay dadaal lagu guuleysto dareenkan isla markaana uu wadada u xaareyo dadaallo la mid ah.
EKOL ELECTRICAL ELECTRONICS CONSTRUCTION WAXYAABAHA IYO CABASHADA
FIATA 2014 Waxay noqotay Madaxa Guud ee Shirweynaha Istanbul
HORIZON 2020 waxay bixisay 2.5 million euro oo ka timid Midowga Yurub ilaa İzmir